Semalt: A Botnet of Hijacked IoT Devices dia manome ny fanafihana DDoS lehibe indrindra hatramin'izay
Ny fanafihana amin'ny Internet dia miankina amin'ny fepetra fiarovana azo antoka. Tokony hataonao antoka ny tranokalanao amin'ny sasany amin'ireo fanafihana DDoS mahazatra ireo. Amin'ireto tranga ireto, ny botnets dia mitondra lohamilina iray, ny fanaovana tranonkala dia tsy mahavita ny adidiny voalohany. Ny tambazotran'ny botnets dia afaka manatanteraka fanafihana DDoS lehibe ary manome orinasa maro tsy mahomby amin'ny valin'ny server. Ny fanafihana botnety goavana dia nahitana fitaovana maro izay manana foibe fanaraha-maso mahazatra ho an'ny fanatanterahana ny asany maro. Amin'ny tranga maro dia miatrika heloka bevava tahaka ny hosoka amin'ny aterineto ny olona noho ny tsy fahampian'ny tranonkala maro. Ohatra, ny fanafihan'i Akamai dia mitranga rehefa misy serivisy botnet mikendry sehatra iombonana.
Ny fanafihana IoT DDoS dia manana fiantraikany bebe kokoa noho ny an'ny Ellis. Tahaka ny tamin'ny 2010, ny ankamaroan'ny fanafihana DDoS dia tao amin'ny tranonkala toy ny Joomla, izay nitarika ho amin'ny tsy fahampian'ny fifandraisan-davitra ny orinasa. Avy amin'io fanafihana io dia nahazo lesona sarobidy ny olona ary nahita ny antony tokony hiarovan'izy ireo ny serverany. Nik Chaykovskiy, manam-pahaizana Semalt , dia milaza fa misy fomba hafa izay ahafahan'ny fahombiazana amin'ny fanatanterahana izany. Amin'ny ankamaroan'ny fampiharana amin'ny varotra e-varotra, ny filaminan'ny tranonkala iray dia miankina amin'ny fepetra sasantsasany ataon'izy ireo mba hisorohana ny spammers. Amin'ny toe-javatra sasany, ireo hackers dia afaka mandresy ireo fepetra ireo amin'ny fampiasana fanafihana tsotra fotsiny.
Fanatsarana ny môtô sy bots
Ny SEO dia midika amin'ny fampiasana ireo boot mainty. Tranonkala maro no miankina amin'ny bidy varotra hanatsarana ny traikefan'ny vohikalany. Na izany aza dia afaka mamoaka basy malemy ireo mpampiasa azy ary misy fikasana ratsy..Ny ankamaroan'ny fanafihana DDoS lehibe dia miseho amin'ny fampiasana sasantsasany amin'ireny botsika ireny. Ny tranokalanao dia tokony ho afaka hanavaka ireo fanafihana ireo. Azonao atao ihany koa ny miantoka ny toerana misy anao ao amin'ny SERP indrindra indrindra rehefa voaro ny tranokala. Ireo tranonkala tsy azo antoka na ireo tsy manana plan SEO tsara dia mijaly noho ny olana mifandraika amin'ny sokajy. Ankoatra izay, tranonkala iray dia mety tsy hahomby amin'ny seho SEO rehefa misy vitsy na tsia ny famelezana fanenjehana spam.
Rehefa manao dokam-barotra amin'ny aterineto dia ilaina ny fandinihana ny fivoaran'ny fampielezan-kevitrareo. Ireo Webmasters dia miankina amin'ny tetika tahaka ny Google Analytics izay afaka manakana ny spam. Ao amin'ny Google Analytics, azonao atao ny manakana ny fifamoivoizana amin'ny Botnet sy ny sasany amin'ireo fanafihana spam hafa. Azo atao koa ny mampiasa fepetra ahafahana manao tranokala manakana ny fifamoivoizana anatiny. Azonao atao ny mampiasa ny Google Analytics mba hahatonga ny fandefasana ny tranonkalanao ho ampy. Amin'io fepetra io, dia misy fomba hafa izay mety hampiasa fitaovana hanapahana botnets.
Ny ankamaroan'ny orinasa dia mitaky tranonkala mahomby hanatanterahana ny asany andavanandro. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ireo tranonkala dia mampiasa ny serivisy toy ny valin'ny server ary koa ny botnets mba hahombiazany ny zava-mitranga. Raha misy hosoka amin'ny aterineto, mpampiasa iray dia afaka manomboka fanafihana botnet amin'ny tranonkala iray. Amin'ity tranga ity dia mety hianjera sy hianjera ny tranonkala iray manontolo, miteraka fahasimbana amin'ny fomba fiasan'ny tranonkala. Tao anatin'ny lasa vao haingana, ny fanafihana botnet toy ny Akamai dia mety miteraka voka-dratsy maro momba ny fahombiazan'ny tranonkala. Azonao atao ny miaro ny tranonkalanao amin'ireo fanafihana ireo amin'ny fanafihana maro hafa. Azonao atao koa ny manitsy ireo fanentanana ao amin'ny tranokala amin'ny tranonkalanao Source .